FANAMBARANA MAHAKASIKA NY FIKAHONANDOHA FAHA-45N’NY VONDRON’NY GAZETY MITENY FRANTSAY – Ilontsera
24Nov 3 mars 2017
Ny Ivom-pandalinana ny Tontolon’ny Serasera eto Madagasikara dia mankasitraka ny fanatontosana ny Fikahonandoha faha-45n’ny Vondron’ny Gazety miteny Frantsay (Union de la Presse Francophone-UPF), tanterahina any Antsirabe. Ankasitrahina ny UPF nihaino ny antsoantson’ny rehetra manoloana ny loza mitatao hateraky ny Lalàna momba ny serasera eo amin’ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fanaovan-gazety ary ny fahazoana vaovao marina. Isan’izany ny masoivoho vahiny, ny fiarahamonim-pirenena, ny tompon’orinasa fanaovan-gazety, ny mpanao gazety sy ny olon-tsotra. Saingy tsy nisy akony, na kely akory aza, teo amin’ireo tomponandraikim-panjakana izany.
Soa fa nisy ny Fivorian’ny UPF tanterahina eto Madagasikara ankehitriny ka ahazoana indray misintona ny lakolosy fanairana satria toa mandrimandry manana aretina isika manoloana ny tsy famotopotorana ifotony ny olana sendrain’ny asa an-gazety sy ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Soa fa eto ny UPF hampatsiahy amin’ny Mpitondra ny tokony hiverenana amin’ny fifampidinihina mba hizorana any amin’ny lalan’ny marimaritra iraisana hahazoana lalàna marina, tsy mitanila sy ekena ary ankatoavin’ny rehetra. Singa iray io hihorenan’ny tena demaokrasia eto Madagasikara.
Manantena àry ny ILONTSERA fa mba hohainoin-teny amin’ity indray mitoraka ity ny UPF rehefa tsy nasiana fotony ihany ny antso fanairana nataon’ireo hery velona samihafa, isan’izany ny Fiarahamonim-pirenena izay nitaky ny hamerenana ny solontenany ao anatin’ny ANRCM na ny « Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée », Rafitra Nasionaly Mandrindra ny Serasera, taorian’ny nanesorana izany Solontena izany ao anatin’ny Fehezan-dalàna (And.52) nalefa hofidian’ny Solombavambahoaka 18 amin’ny 151.
Mitohy ny amboletra na teo aza ny Fanamarihana nataon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana mikasika ny tena fahaleovan-tena marina tokony hananan’ny ANRCM (Décision n°30-HCC/D3, Considérant n°53) amin’ny maha rafitra saro-pady azy loatra ho an’ny fahalalahana sy fandraisana andraikitra eo amin’ny sehatry ny fampahalalam-baovao sy ny serasera, ny fanajana ny zon’olombelona ary ny fampanjakana ny demaokrasia.
Ny Filoham-pirenena ihany no nanambara tany Antsirabe, nandritra ny lahateny nataony, fa mitsinjo ho toy ny anankandriamaso ny fahalalahana maneho hevitra sy mamoaka vaovao ny tenany ka aoka ho arahin’asa amin’izay ny fampanantenana rehetra atao toa ny « Pacte de responsabilité » na ny Fifanarahana hisian’ny fahamarinan-toerana politika sy ny « Espace de concertation », Sehatra ifanakalozan-kevitra, izay soson-kevitra natolotry ny Filoha ihany mikasika ny Lalàna mifehy ny serasera. Saingy hatreto, tsy re dona tsy re tsaika ny tohin’ny resaka. Ny lalàna rahateo efa manan-kery.
Azo inoana anefa fa antoka iray hahatsara ny endriky ny firenentsika any ivelany ny faneken’ny mpitondra hiverina an-databatra boribory indrindra amin’izao ankatoky ny Fivorian’ny mpamatsy vola an’i Madagasikara izao (“Conférene des bailleurs de fonds”) atao any Parisy, ny voalohan’ny volana desambra ho avy izao. Ny mpitondra ankehitriny rahateo efa matimatin’ny fihevitry ny any ivelany hatrany hahamarin-toerana ny sezany ka tsy mijery firy intsony ny tena hetahetan’ny vahoaka izay toa lasa anjorom-bala amin’ny fampandrosoana tian-katao.
Noho ireo antony ireo, ILONTSERA dia mamerina ny antso avo hiverenana amin’ny fifampidinihana. Miantso ihany koa ny tomponandraikim-panjakana hanome antoka ny amin’ny fanomezan-danja izay vokatry ny dinika mety hisy ary hiara-hikaroka vahaolana maharitra sy eken’ny besinimaro hamahana ifotony ny olana na momba ny Serasera ny famoaham-baovao manokana na mikasika ny fiainam-pirenena ankapobeny. Manantena ihany koa fa hisy hihaino ny fanamarihana ataon’ny UPF na dia mahamenatra sy manala baraka aza ny fiandrasana hatrany ny vahiny hanome lesona antsika Malagasy izay mifanipaka toy ny valala an-karona ka samy maka ho azy ary samy mandeha samy mitady.
Antananarivo, faha-24 novambra 2016
COMMUNIQUÉ SUR LES 45ème ASSISES DE L’UNION DE LA PRESSE FRANCOPHONE (UPF)